Locko Gracious: Kisah Maleficent dalam bahasa Malagasi
Ny tantara dia manomboka amin'ny ny tantaran'ny vehivavy iray taloha. Nisy tanora atao hoe Maleficent miaina Fairy matanjaka ao amin'ny hivadika, manamorona faerie fanjakan'ny olona. Amin'ny maha-tovovavy, dia raiki-pitia tamin'ny olona zazalahy, iray Zazalahy Tantsaha avy, atao hoe Stefan izay adala ny Maleficent sy lehibe laza mba ho mpanjaka. Nihaona izy ireo, rehefa tonga Stefan ho amin'izao tontolo izao mba mangalatra hivadika. Tamin'ny farany, dia lasa namana, Stefan nanoroka Maleficent (Isobelle Molloy) ka miantso izany ho oroka ny Tena Fitiavana. Izy sy miara-Stefan lehibe mandra-pahatongan'ny andro iray Stefan tsy hizaha azy. Stefan olon-dehibe (Sharlto Coopley) te hahatratra ny nofiny ny nipetraka tao anaty lapa. Mandritra izany fotoana izany, olon-dehibe Fairy Maleficent lasa matanjaka, ny elany hitombo ho lehibe noho ny hafa matoatoa izay nanaja eo amin'izao tontolo izao hivadika.
Maleficent nandresy ny miaramila Mpanjaka Henry (Kenneth Cranham) tao amin'ny ady izay ny fanjakan'ny olona nanafika ny hivadika. Mpanjakan'ny fanaintainana ka nanatitra ny satro-boninahiny ny olona izay afaka mamono Maleficent. Stefan tonga amin'ny alina, ary maka zava-mahadomelina, fa tsy hamono azy. Farany, Stefan mirehitra elany Maleficent amin'ny alalan'ny fampiasana vy (zavatra izay mamono ny Fairy) ka ho entiny ho ao amin'ny mpanjaka izany, porofo ny amin'ny famonoana olona.
Maleficent vaky fo noho ny famadihana sy ny fahaverezan'ny elatra. Ary nanomboka nanao ny trano ny fanjakan'ny maizina ao amin'ny Fairy faritra. Namonjy Diaval (Sam Riley) nianiana hanompo azy ho amin'ny fiainana. Diaval ho namana sy fahatokiana. Diaval afaka manova ny endriky ny akoho ho olona hanatanteraka ny asa omen 'ny ratsy Maleficent.
Indray andro, Diaval lazao fa Stefan ankehitriny ny mpanjaka no hanao batisa ny zaza vao teraka vavy, Aurora. Ho setriny ny namadika Stefan, Maleficent tonga tsy nasaina, ary Voaozona amin'ny ozona zaza matory. Aurora dia matory mandrakizay ao amin'ny faha-16 fitsingerenan'ny andro nahaterahany, rehefa voatsindrona tam ny fanondrony spinner fitaovana. Stefan mangataka ny famindram-po. Maleficent ozona manome ny manome ny fanefitry ny amin'ny fanoroham-tena fitiavana izay natao mba hataony ho fihomehezana "ny oroka ny tena fitiavana" dia mety tsy misy.
Stefan mandoro spinneret ka nataony tao amin'ny efitrano iray mihidy. Nandefa Aurora hiaina ao anaty ala telo matoatoa (Juno Temple, Imelda Staunton, Lesley Manville) mandra-pahatongan'ny andro faha-16 andro nahaterahan'i Mpanjaka Stefan fiantraikany amin'ny fahatsapana ho meloka, ny misavoritaka kokoa, ny ratsy sy ny hamaly faty azy.
Na dia Maleficent mankahala Aurora (Elle Fanning), fa nikarakara ny lavitra, rehefa ny matoatoa tsirambina, na tsy hanao ny asa. Tamin'ny faha-15 taona, nihaona tamin'i Aurora sy Maleficent Maleficent dia mino fa ny Fairy godmother izay niambina nandritra ny taona maro. Aurora Nandany fotoana be dia be ao amin'ny mihoatra ny natoraly mandra-Maleficent fantany fa nanomboka tahaka ny andriambavy. Niezaka izy mba hanaisotra ny ozon'ny torimaso, fa very maina.
Rehefa nihaona tamin'i Prince Aurora Phillip (Brenton Thwaites), izy ireo mifanohitra izy nahasarika amin'izy samy izy. Phillip teny an-dalana ho any amin'ny lapan'ny mpanjaka Stefan, fa nampanantena fa hiverina tsy ho ela mba hahita izany. Ary tamin'ny andro mialoha ny faha-16 taonan'ny, ny Aurora naneho ny faniriany mba hitoetra Maleficent ao amin'ny fanjakana. Na izany aza, ny elf aoka taratasy mi- dia milaza Aurora momba ny ozon'ny ny ratsy Maleficent. Nalahelo, Aurora nankany amin-drainy ny fanjakany.
Aurora Stefan voahidy tao amin'ny efitra mandra-azo antoka ny masoandro eo amin'ny taonan'ny Aurora. Na izany aza, Aurora afa-nandositra avy amin'ny efitrano mihidy ka nirenireny tao an-trano-maizina izay mihazona ny fitaovana rehetra izay efa nodorany tamin'ny afo spinner. A kofehy-pahagagana kodiarana hita sy Aurora jabbed ny rantsan-tànany teo amin'ny fanjaitra. Maleficent izay mahomby mba hiarovana Aurora, tsokosoko tany anati-rova lapa. Manantena izy fa afaka Phillip handrava ny ozona. Phillip sy Maleficent oroka tsy hiala tsiny ny andriambavy. Maleficent sy Aurora dia nanoroka ny handriny Taitra, satria "tena fitiavana" ho an'ny Aurora Maleficent toy ny fitiavana ny reny amin'ny zanany vavy. Aurora dia nanamafy ny faniriany hitoetra Maleficent ao amin'ny mihoatra ny natoraly.
Raha ny fandosirana, Maleficent nalain'ny vy harato. Maleficent dia tsy afaka nandresy ny mpiandry sy Stefan sy vy dia manao fitaovam-piadiana. Noho ny majika farany, Maleficent hanova ho dragona Diaval. Saika natao maty izy, fa Aurora Maleficent nanafaka elany indray mandeha nangalatra-drainy. Miaraka amin'ny elatra, Maleficent nikapoka Stefan izay maty avy eo.
Aurora lasa vadin'ny mpanjaka, izay niezaka ny hampiray ny fanjakana roa, ny fanjakan'ny olona, ​​ary ny matoatoa izay Phillip koa nikambana Aurora. Ny mpitantara dia mandry vehivavy antitra, izay nilaza tamiko ity tantara ity, izay Aurora. Rehefa tapitra ny tantara, Aurora fa ny fanjakana izany fa tsy ho iray amin'ny ho mahery fo na ny ratsy lehilahy, fa ny olona iray izay lasa mahery fo tamin'izany andro izany ny ratsy Guy-Maleficent.